/Blog/Gallery/Umhlahlandlela Ophelele Wokuthenga I-2019 Yokwakhiwa kweSARM SR9009
Posted on 10 / 14 / 2019 by UDkt Patrick Young wabhala ku Gallery.
SR9009 noma i-stenabolic isengezo se-CAS 1379686-29-9 esilingisa imiphumela yokuzivocavoca kwe-Cardio. Hhayi nje ukuthi lo muthi uzokusiza unciphise amanye amafutha omzimba wakho ngokweqile, kepha futhi uzothuthukisa amandla akho ngenkathi ukhulisa ukukhuthazela.
I-SR9009 iyi-synthetic synthetic, eyavela ngokunqunyelwa kukaSolwazi Thomas Burris. Ihlobene kakhulu ne I-SARMS (Ukukhetha i-Androgen Receptor Modulators), kepha kuyangidabukisa iprotheni ye-Rev-Erbcy etholakala emthanjeni wamathambo, izicubu ze-adipose, ubuchopho kanye nesibindi.
UProfesa Burris waqhamuka naye SR9009 (I-1379686-29-9), ihlose ukutadisha nokuqonda isigqi se-circadian.
I-2.Isebenza kanjani i-SR9009?
Uyawazi lowo muzwa owuthola ngemuva kokugijima i-2km kusitebhisi noma uphakamise amanye amarobhothi? Well, SR9009 isisindo somzimba kuzokwenza uzizwe ngendlela efanayo. I-supplement inendima ekuguqulweni kwe-circadian, umthethonqubo we-lipid, kanye nokulawula kwamazinga kashukela.
I-SR9009 SARM idlala indima enkulu ekushukumiseni kwe-Rev-Erb. Le proteni ithinta amandla omzimba okushisa kakhulu amafutha, ushukela kanye ne-cholesterol embi. Ngakho-ke, ifaka inqubo yokulahlekelwa isisindo ngenkathi ithuthukisa ukukhuthazela. Noma ngabe uvivinya umzimba, ubungazizwa unamandla futhi ukhathele kancane ukuthi ukwazi ukwenza ukuzivocavoca okwengeziwe komzimba.
I-Stenabolic metabolize amafutha, i-lipids, noshukela. Lapho ukusetshenziswa kawoyela komzimba kugcwele, khona-ke ngokungangabazeki uzothola ukusebenza okuphezulu. Esifundweni sokuqala sisebenzisa amamodeli we-murine, amagundane ayengaphansi I-SR9009 powder (I-1379686-30-2) umthamo ungaqhubeka ngokushesha ngokushesha kunangaphambili. Le ngxenye yobufakazi ingaba yisizathu esenza ukuthi i-stenabolic ifakwe kuhlu phakathi kwezidakamizwa ezingavunyelwe kwezemidlalo.
Uma ungeyena umpetha wokuzivocavoca, lezi zindlebe zakho zifisa ukuzwa. I-Stenabolic iphinda kabili isilinganiso sakho se-metabolic ngenkathi uphumula. Ngemuva kokudla, umzimba wakho uvame ukuguqula ukudla kube amafutha. Kodwa-ke, isengezo sokulahlekelwa kwesisindo se-SR9009 sizokwandisa ngokushesha i-metabolism yokuthi uzoqala ukushisa lamafutha khona lapho.
Ucwaningo lwakamuva lukhombisa ukuthi i-stenabolic yi-ejenti elwa nomdlavuza. Umphikisi womdlavuza we-SR9009 uthinta abashayeli be-oncogenic, kufaka phakathi i-PIK3CA, HRAS, ne-BRAF. Kumaseli ayingozi, umkhiqizo ufaka i-apoptosis futhi ukhubazeke ukukhula kwesimila ngaphandle kokubanga imiphumela emibi.
Ngaphandle kokulebula ukusetshenziswa kwelebula ye-SR9009 athole inzuzo yemisipha izidakamizwa, isengezo sinamanani abalulekile emithi. Ochwepheshe bemitholampilo bayincoma kakhulu ukuthi iziguli ezinesifo sikashukela nalabo bantu abanokuhlaselwa yisifo sohlangothi bahlukunyeziwe.
Uma uhlela ukuphatha i-SR9009 powder (1379686-30-2) yokulawula ukugula kwakho, qiniseka ukuthi ukhuluma nodokotela wakho ngaphambi kwesikhathi. Umuthi uphephile, kepha udokotela wakho kumele akweluleke ngemithi ekhona ngenkathi ubheka noma yiziphi izimpawu ezingezinhle.
Ngokusetshenziswa kwelebuli engekho, umthamo ojwayelekile we-SR9009 umayelana ne-30mg / ngosuku. Umthamo uhlukaniswe kathathu.
Uma ngemuva kokukhuthazela, kufanele uthathe u-supplement ngaphambi nje kokushaya ejimini. Isizathu ukuthi i-SR9009 ine-half-life; ngakho-ke, imiphumela ivela ngokukhanya. Okufanelekile, ukuphathe ngaphambi kokudla ukuze ukwazi ukugcina umzimba usebenza kahle usuku lonke.
I-4.Izimpawu zeSR9009, Ngabe Ulindeleni?
Nyusa Ukulahlekelwa Isisindo
I-SR9009 SARM ithuthukisa izinqubo ze-metabolic. Uma kwenzeka ukungena, abakwa-stenabolic babengahlelela umzimba ukuze bashise amakhalori ngokweqile esikhundleni sokuwashintsha abe ngamafutha. Hhayi nje kuphela lapho i-supplement ilinganisa izinhlobo zokugcina amafutha, kodwa futhi inciphisa ukwenziwa kwamaseli amasha wamafutha esibindini.
Uma umgomo wakho ukunciphisa umzimba, qiniseka ukufaka phakathi imisebenzi yokomzimba ejwayelekile yakho. Ukusebenza ngaphandle, ukudla, nokuthatha i-SR9009 pre Workout supplement kusheshisa ukushiswa kwamafutha ngokweqile. Ucwaningo lukhombisa ukuthi ukusebenzisa i-stenabolic kwehlisa amanoni acid ne-plasma triglycerides okuhlushwa yi-23% ne-12%, ngokulandelana.
Ezimweni ezikhuluphele lapho ukusebenza noma ukudla kungabeyona inketho, odokotela cishe bazonquma lokhu okungeziwe.
Ihlela ukubuyekezwa kwamakhasimende, umsebenzisi oyedwa uqinisekise ukuthi i-SR9009 powder (1379686-30-2) umsize ukuthi alahle amakhilogremu we-17 ezinyangeni ezintathu.
Lokhu kugcizelela kungezeli kuphela ukukhulisa izicubu zomzimba kodwa futhi kuthuthukisa amandla nokusebenza kwawo. Umuzwa owuthola ngemuva kokuphatha umthamo we-SR9009 ulingana nalowo we-weightlifting.
Umuthi uvusa ukukhiqizwa okukhulu kwe-mitochondria ngaphakathi kwamangqamuzana emisipha, yingakho kukhulisa imetabolism. Lawa ma-organelles anesibopho sokukhiqiza amandla ezicutshini zemisipha. Ngaphandle kwalokho kuzoba nokwanda kokusetshenziswa kwama-glucose kanye nokusetshenziswa kwamafutha acid ngaphakathi kwezicubu.
Ngokomtholampilo, i-SR9009 izuzisa asebekhulile abahlupheka ngenxa yokuwohloka kwemisipha noma i-sarcopenia.
Iningi labadlali bezokuzivocavoca ngeke liphuthelwe ukufaka i-SR9009 yokuthola izidakamizwa emithanjeni yabo yokwakha umzimba. Uzophakamisa izinsimbi, usebenzise i-treadmill, noma wenze noma yikuphi ukuzivocavoca umzimba ngaphandle kokuzizwa ukhathele noma unekhanda.
Akungabazeki ukuthi isengezo sizothatha ukusebenza kwakho kube yi-notch ephakeme kunangaphambili. Uma ucabanga ukuthi lezi zinzuzo ze-SR9009 zaziwumbuso, mhlawumbe kufanele ubuze ukuthi kungani i-anti-doping agency ingavimbela ukusetshenziswa kwayo emidlalweni yokuncintisana.
Njengoba uThomas Burris, umsunguli weStenabolic, asho, lo muthi ukuguqula ube ngumsubathi onamava ngesikhathi sokupela isikhathi. Ngeke uphelelwe amandla noma amandla lapho wenza izivivinyo kakhulu.
Uma uhlala ulele phakathi nosuku, i-stenabolic ingaba yikhambi lakho elilandelayo. Esifundweni sokuqala, isengezo sabonakala siguqula indlela yokulala yamamodeli we-murine. Ososayensi baphawula ukuthi la magundane ayephapheme kakhulu phakathi nosuku, futhi akukho noyedwa kubo owakwazi ukulala ubuthongo obukhulu. Ngakho-ke, uma ufuna ukungena kwisigqi sakho se-circadian ukuze ushintshe iphethini yakho yokulala, i-SR9009 izokwenza ngentokozo ukukwenza.
Ngenxa yempilo efushane engu-SR9009, umphumela wokuphaphama uzoba wesikhashana. Ngakho-ke, awusoze wangabi nalutho usuku lonke.
Ukulimala Kwethishu (Fibrosis)
Ucwaningo luqinisekisa ukuthi amagundane anesibindi i-fibrosis alulama ngokuphelele ngemuva kokuthatha i-SR9009 amasonto amabili.
Esimweni lapho inhliziyo ikhula ngokungajwayelekile, i-SR9009 powder (1379686-30-2) isebenza ukuguqula umehluko ngokunciphisa usayizi wesitho nesisindo. Ngenkathi amanye amagundane anemithambo elukhuni ephathwa nge-stenabolic, abacwaningi baphawula ukwehliswa kosayizi bezilonda zemithambo yegazi ngemuva kwamasonto ayisikhombisa.
Abanye abasebenzisi bavuma ukuthi isengezo sadlala indima enkulu ekwehliseni umfutho wegazi labo.
Yehlisa I-Cholesterol Yegazi
Uma ukhuluphele kakhulu, amathuba ukuthi amazinga akho cholesterol aphakeme. I-SR9009 izonciphisa ifike ku-47% ye-LDL, ngaleyo ndlela yenze ukusebenzisa kwakho kube nokukhiqizayo. Kufanele wazi ukuthi isengezo asithinti amazinga e-HDL.
I-Rev-Erbs idlala indima ebalulekile ekulawuleni ukuvuvukala nokulimala ngaphakathi kwe-CNS. I-SR9009 ivuselela ama-receptors enuzi ka-Rev-Erbcy, anemiphumela yokulwa nokuvuvukala.
Umuthi ucindezela ukukhiqizwa kwama-molecule wokuvuvukala njenge CCL2, MMP-9, kanye ne-TNF-α. Njengoba ukulimala kwezicubu nokuvuvukala okungapheli kuyizici ze-oncogenic, ososayensi bacwaninga ngamathemba wokuphikisana nomdlavuza we-SR9009 ku-sencocence.
I-SR9009 inciphisa ukukhathazeka kumamodeli wamagundane.
Uma une-trypanophobia, kunezindaba ezimnandi kuwe. Yebo, i-SR9009 iyatholakala ekuphatheni ngomlomo. Akusekho imijovo ebuhlungu, njengoba kunjalo ngezidakamizwa eziningi ezishisa amafutha.
I-5.Half Impilo ye-SR9009
I-SR9009 isigamu sempilo sifushane njengamahora amane. Ngalesi sizathu, kufanele uhlukanise umthamo wakho ngezikhathi ezithile zamahora amane ukuze uzinze i-bioavailability yezidakamizwa egazini.
6.SR9009 Umthamo kanye nokuhamba ngebhayisikile
Umthamo we-SR9009 uncike ezintweni ezimbalwa. Lokho wukuthi, lokho ofisa ukukufeza nokuthi ngabe ufaka ezinye izithasiselo emjikelezweni wakho. Ngaphandle kwalokho, inani elibhalwe phansi libuye lincike ekutheni umzimba wakho usabela kanjani.
Umthamo ojwayelekile yi-30mg ngosuku, ongawuhlukanisa ube yimithamo emithathu ehlukene. Ngokweqiniso, lo muthi usho ukuthi kufanele uphathe iphilisi ngaphambi kokudla noma yikuphi ukudla kwakho okuyisikwele. Esikhundleni salokho, ungasebenzisa isengezo ngemuva kwamahora amane.
Isikhathi esiningi, ukwahlukanisa i-SR9009 powder (1379686-30-2) i-preout yokuzivocavoca ngaphambi kokusebenza kungaba nzima kakhulu, ikakhulukazi kubasebenzisi abangakhathali. Ubani ongathatha ngisho nomuthi ngezikhathi ezithile ngaphandle kwamahora amane ngaphandle kokuphikisana? Ngakho-ke, uma ungakhululeki ngalolu hlelo lwe-dosing, unganquma ukulisebenzisa ihora ngaphambi kokwenza umsebenzi wokuzivocavoca.
Umjikelezo we-SR9009 uqhubeka phakathi kwamasonto ayisishiyagalombili kuya kwayishumi nambili. Njengoba kunamathuba okuthi ubekezeleleke kulo muthi, kufanelekile ukuthatha i-8-sonto off.
Lesi sidakamizwa asithinti isibindi noma izinso. Noma kunjalo, ungavikela lezi zitho ngokufaka ezinye izithasiselo ezibalulekile zokuvikela njenge-N2Guard kumjikelezo wakho we-SR9009.
I-7.Udinga i-PCT ye-SR9009?
Ngokungafani nezinye izithasiselo, i-stenabolic ayidingi I-PCT (I-Post Cycle Therapy) ngoba umuthi awuphazamisi amazinga we testosterone.
I-8.Ingabakhona Imiphumela Emibi Yesibi Nezingozi Zokusebenzisa kwe-SR9009
Izimpawu ezingenhla zizothinta ikakhulukazi abaqalayo. Lapho umzimba wakho usuvumelanisa nesengezo, izimpawu ziyophela. Noma kunjalo, uma imiphumela emibi ye-SR9009 iba yimbi kakhulu, kufanele uyilahle bese ukhuluma nodokotela wakho.
I-SR9009 kungenzeka ibe yimbi kakhulu imeko yamadoda anamandla aphansi we-libido noma erectile dysfunctions. Ngesinye isikhathi, isengezo siholela emazingeni aphansi e-testosterone.
I-Stenabolic akuyona i i-steroid. Ngakho-ke, ukuyithatha ngeke kuphazamise uhlelo lwe-hormonal. Amazinga akho e-testosterone ngeke wehle, futhi nomuthi ngeke uhlangane ne-estrogen. Kwabesifazane, lokho okungeziwe ngeke kuhole umjikelezo wokuya esikhathini ongafanele.
I-9.Stacking SR9009 nezinye i-SARM
Kuboshwe i-SR9009 nge I-Ostarine (MK-2866) izothola imiphumela ekhethekile, ikakhulukazi esigabeni sokubuyiselwa kwemali.
I-Ostarine ngokwayo, iyi-SARM enhle kakhulu yemijikelezo eminingi yokusika neyokusika. Kodwa-ke, uma ufuna ukukhuthazela okuphezulu, kufanele uyihambise nge-SR9009. Ngenkathi usesitayeleni, qiniseka ukusebenzisa i-25mg ye-ostarine nsuku zonke. Okwe-stenabolic, i-10mg izosebenza, kepha kufanele uyithathe lapho usuzoshaya isikhungo sokuqina.
I-SR9009 ne-GW501516 (I-Cardarine) babe nokufana. Olunye ucwaningo luze luveze ukuthi lezi zingxube ezimbili zibopha ama-receptors afanayo.
Njengoba usuvele uyazi, i-stenabolic inokuphila okusheshayo kwengxenye, engeke ikuhlale usuku lonke. Ngokuphikisana, i-bioavailability ye-Cardarine ifinyelela emahoreni we-24. Ukuhlanganiswa kwalawa amabili kuzoba nomphumela we-24 / 7.
Uma usebenzisa i-SR9009 eceleni kwe-GW501516, kufanele ucabangele okwangaphambili njengesengezo sangaphambi kokusebenza. Ukusho ukuthi, kufanele uphathe i-stenabolic kuphela ngezinsuku osebenza ngazo.
Uma usesitaki se-SR9009, umthamo uyi-10mg kuphela, okufanele uwuthathe kungekudala ngaphambi kokusebenza. Ye-GW501516, umuthi ofanelekayo yi-20mg / usuku, okufanele usebenzise ngalo ibhulakufesi yakho.
I-SR9009 yokuthengisa ngokuyinhloko ihlose abakhi bomzimba abalandela ukukhuthazela, ukwanda kokusebenza ngokomzimba, ukululama okusheshayo ekusebenzeni ngaphandle nokwakheka kwemisipha emile.
Ukusuka ekubuyekezweni okuhlukahlukene kwe-inthanethi, abasebenzisi babika ukuthi isengezo sithuthukise ukukhuthazela njengoba bangenza izivivinyo ezinamandla ngaphandle kokuzizwa bekhathele. Kwabanye, ukukhuphuka kwamandla nokuqina kwamandla bekufinyelela ezingeni eliphakeme ngokushesha ngemuva kokuphatha i-SR9009 powder (1379686-30-2).
Ngasohlangothini olubi, abanye abasebenzisi behluleka ukudonsa i-dosing ejwayelekile njalo emahoreni amane. Kodwa-ke, labo abasebenzisa i-SR9009 stacks abakutholanga lokhu kuyinkinga ngoba bekumele bathathe okungezelelweyo ngenkathi belibangise ejimini.
Abathengi abambalwa bavumile ukuthi i-stenabolic ayibenzanga bazizwe kakhulu. Ngaphandle kokuqwasha, akekho obonakala ebhalisa imiphumela emibi ye-SR9009.
I-11.Is SR9009 Bioavava?
Kube nokuqagela ukuthi i-SR9009 ine-zero bioavailability, ikakhulukazi ekuphathweni komlomo. Kodwa-ke, ngingakuphikisa lokhu ngesibindi ngoba uma isengezo besingekho
I-12.Ingathengwa kuphi i-SR9009
Abathengisi abaningi babeka i-SR9009 ukuthi ithengiswe. Yize izitolo eziku-inthanethi ziyindawo ekahle yokuthenga izengezo, kufanele uqaphele kakhulu ukuthi ungazweli ekuthengeni imikhiqizo yomgunyathi.
Uma ufuna i-stenabolic ebanga lomuntu, yithole kumphakeli odumile. Ungenza i-oda nge I-AASraw.
I-SR9009 powder (I-1379686-30-2) itheleke embonini yokwakha umzimba lapho ucwaningo luqinisekisa ukuthi isengezo senze amagundane abe nemisipha yokuncipha. Ngaphandle kwalokho, babekhuthele, bekhombisa ukusebenza kahle komzimba, futhi babenamandla kunakuqala.
Abakhi bomzimba ngemuva kokuxhuma noma ukusika bazohlomula ngokugcwele kwi-SR9009. Ezimweni lapho kufanele uqeqeshe khona kanzima, umuthi unyusa izinga lokushaya kwenhliziyo yakho, ngaleyo ndlela unciphise ukukhandleka nokukhathala. Ngaphezu kwalokho, isengezo sokwakha umzimba se-SR9009 sinciphisa ukuvuvukala kanye nomonakalo wezicubu ukuze inqubo yokululama isheshe.
Isengezo sokwakha umzimba se-SR9009 sisebenzela ukuthuthukiswa kokusebenza. Okungenani, kukhona ukulingwa okwanele kokuqala kokusekela leli qiniso nokubuyekezwa komsebenzisi okuningana okuhle komkhiqizo.
Kodwa-ke, ukusebenza kahle kwalesi sidakamizwa kube yithambo lokuxabana phakathi kososayensi nabacwaningi nososayensi kakhulu. Isibonelo, kuye kwaba nama-anecdotes ukuthi i-SR9009 bioavailability yomlomo ayi-zero. Hhayi, angifisi ukwenza njengommeli kaDeveli, kepha i-95% yabasebenzisi be-stenabolic baqinisekisa ukusebenza kwayo. Ngaphandle kwalokho, kufanele ube nokubuza ukuthi kungani izinhlangano ezilwa doping zingaba nerve ukuvimbela ukusetshenziswa kwayo emidlalweni yezemidlalo lapho into ingasebenzi.
Qaphela ukuthi imiphumela ye-SR9009 ibonakala lapho usebenza njalo ngenkathi udla ukudla okunempilo. Gwema ukudla okunamafutha, amakhalori, nokunqenqemeni kokubhema nokubhema.
Cho, H., Zhao, X. et al. (2012). Ukulawulwa kwe-Circadian Behavior and Metabolism ka-REV-ERBα ne-REV-ERBβ. IGene Expression Laboratory, iSalk Institute for Biological Study.
IMorioka, N., Zhang, FF, Tomori, M., Hisaoka-Nakashima, K., Saeki, M., kanye noNakata, Y. (2016). Ukugqugquzelwa kwe-NViths Receptor REV-ERBs ilawula i-Tumor Necrosis Factor-Ebonisa Ukuvezwa Kwemolekyuli Ekulimaza Kumaseli e-C6 Astroglial Cell.
Amakhaya, i-PG, iBrandon-Warner, i-E, et al. (2016). I-Rev-Erb Agonist ne-TGF-β Ngokufanayo Thinta i-Autophagy kodwa Ngokuhlukile Lawula i-Hepatic Stellate Cell Fibrogenic Phenotype. Int J Biochem Cell Biol.
UDodson, B. (2013). Izidakamizwa Ezintsha Zilingisa Imiphumela Ezuzisayo Yokuzivocavoca. Ezempilo nokuPhepha.
Woldt, E., Sebti, Y. Et al. (2013). I-Rev-Erbα Modulates Skeletal Muscle Oxidative Capacity ngokulawula i-Mitochondrial Biogenesis ne-Autophagy. Ijenali Yemithi Yemvelo.
USulli, G., Rommel, A., et al. (2018). I-Pharmacological activation ye-REV-ERBs i-Lethal in Cancer kanye ne-Oncogene-Indedu Senescence. Imvelo (Ijenali Yangaphakathi Yesayensi).
Imibono evamile eyiphutha ezweni le-anabolic steroid	Konke mayelana ne-Oxandrolone (Anavar), udinga ukwazi